Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxwayne Xaaf oo si wadajir ah u dhagax dhigay wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxwayne Xaaf oo si wadajir ah u dhagax dhigay wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo +Sawiro
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayo wadada isku Xirta Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo oo ka tirsan Gobolka Mudug.
Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa ugu mahad celiyay Guddiga gacanta ku haaya dhismaha wadadasi dadaalkii adkaa ee ay sameeyeen, kaasi oo ku aadan sidii loo heli lahaa wado wanaagsan maadama halkaasi marar kala duwan ay ka dhaceen shilal geystay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac.
Wuxuu intaasi ku daray Madaxweyne Farmaajo in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay kaalinteeda ka geysan doonto dib u dhiska wadadaasi oo muhiim u ah bulshada kunool Gobolkaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dhanka kale siweyn uga hadlay arrimaha nabadgeliyada magaalada Gaalkacyo,wuxuuna sheegay in shacabka ku dhaqan magaaladaasi looga baahanyahay in ay ilaashadaan amniga iyo xasilooniga magaalada Gaalkacyo.
Ammaanka magaalada Gaalkacyo ayaa siweyn loo adkeeyey,waxaan madaxweynaha Soomaaliya uu kulamo kaladuwan la qaadanayaa madaxda iyo bulshada Galmudug,isagona intaasi ka dib lafilayo in uu u safro deegaano kale oo ka tirsan Galmudug.